Akụkọ - Ngwa ngwa nke igwe na-egweri diamond na nhazi okwute
Enwe nke ihe okike e ji wuo ya ma chọọ ya mma dị iche maka ọtụtụ mba nwere nnukwu nchekwa nke akụrụngwa. Ruo ugbu a, ọtụtụ mba ndị na-emepụta okwute pere mpe ejirila maka oriri obodo, mana ọ bụghị ahịa mbupụ. N'ime afọ ndị na-adịbeghị anya, ahịa ụwa amalitela ịgbanwe nke ukwuu
Ngwuputa nkume nke e ji rụọ ọrụ buru ibu. Na 1998, olu nke mba puta ihe dika nde tọn 47.4, jiri 48% tụnyere 1997
Na 1993, e nwere nanị mba atọ nwere ihe karịrị nde tọn 2 nke igwupụta nkume, ,tali, Spain na China, na mmepụta nke nde 7.5, nde tọn 3.4 na tọn 2.5 nde n'otu n'otu. Mgbe afọ ise gasịrị, ọnụ ọgụgụ nke mba ndị dị otú ahụ amụbawo ruo 7: Italytali na-eduga nde 7.5 nde; China ebilila ebe nke abụọ site na imepụta 6million tọn; Spain nọ n'ọnọdụ nke atọ na nde 4.5, India, nke anọ kachasị na-emepụta ihe, nwere nde tọn 2.4. Mba atọ ndị ọzọ na-ekerịta nde tọn abụọ fọdụrụ bụ Brazil, Portugal na Gris
Onyonyo nke 3 gosiri oke mba ndi a na emeputa ihe nke uwa, na onyonyo 4 na-egosi nkesa mba uwa niile kesara.
Na 1998, mkpokọta okwute mba iri na anọ mekọbara, yiri nke 1997, nke fọrọ nke nta ka o ruo nde tọn 15.2. Nkume nhazi nkume nke mba ndị a bụ isi 14.5% nke ụwa
N'ime otu a, mmepe ya agbanweela. Otutu mba abawanyela nhazi olu ha, ma dika aturu anya ya, Mbelata nke nhazi okwute ka egosiputara na ngwuputa ihe, Japan, South Korea na Taiwan egosiputala usoro mgbada na nhazi.
Clearkpụrụ zuru ụwa ọnụ na-apụta na nhazi nkume. Mba atọ na-achịkwa ahịa ụwa, ya bụ Italy, China na Spain. Na 1998, mba atọ a gụrụ maka nhazi okike okike ụwa (ebe 14 kachasị elu) dị ka egosiri na Ọgụgụ 5:
Nnyocha ahụ na mpaghara ndị a na-egosi na ọdịiche doro anya dị na usoro na teknụzụ eji eme ihe na Europe na China. Esemokwu ndị dị na ọdịbendị, usoro akụ na ụba, ntọala na teknụzụ na-eduga na mmepe nke ụlọ ọrụ nke na-agbaso teknụzụ nhazi dị iche iche, akụrụngwa na ụkpụrụ ngwa ọrụ yana ihe dị iche iche chọrọ maka arụmọrụ diamond na ngwaọrụ ndị a.
Post oge: Apr-14-2021